I-Oi yinkampani yezokuxhumana eyaziwa kakhulu egxile emisebenzini yasendaweni, ithuthukisa ubuchwepheshe ukuze ithuthukise izinga lamakhasimende ayo. Inhloso yenkampani ukuthi abantu baxhumane ngomunye nomunye ngokusebenza kahle nangokusungula izinto ezintsha, okuyingxenye ebalulekile yanoma iyiphi inkampani okumele ibe ku-ajenda. Inkampani ye-Oi...
I-TV Express yinkampani yezokuxhumana eyaziwa kakhulu e-Brazil, ethambekele ezinsizeni zasendaweni futhi inhloso yayo kuwukuba abantu baxhumane. U-opharetha owaziwayo waseBrazil uthuthukisa ubuchwepheshe obusha, unikeza intuthuko kulwazi nokuxhumana, ngaphezu kokuba nezinhlelo zesevisi ezihlukene zamaklayenti akhe. Njengamanje i-TV Express iyinhlangano...
Namuhla sinenani elikhulu leziteshi zethelevishini mahhala ngokuphelele, iziteshi eziningi kangangokuthi akudingekile ukuba siphendukele ekuqasheni iziteshi ezengeziwe sisebenzisa amapulatifomu ahlukile, ngoba, uma singenaso isikhathi esanele samahhala, ngeke sikhokhe. .ngenkonzo esingeke siyijabulele. Isibhakabhaka siyi...
I-Paysafecard ingenye yezindlela ezithole ukuthandwa kakhulu eminyakeni yamuva uma kuziwa ekuthengeni imikhiqizo ngefomethi yedijithali, ngakho ukusetshenziswa kwayo okuyinhloko ukukhokha imidlalo noma okubhaliselwe kwazo zonke izinhlobo. I-akhawunti yokuhlola ayidingekile njengoba iyinkundla esivumela ukuthi ...
Namuhla, kuya ngokuya kuvame ukuthola amakhadi akhokhelwa kusengaphambili azo zonke izinhlobo emakethe, hhayi nje ocingweni, kodwa nakwezinye izinsiza ezifana nethelevishini, i-inthanethi kanye nokubhanga. Lokhu kwakamuva kuhloselwe abasebenzisi abafuna ukuthenga ngokuphepha ku-inthanethi noma abafuna ukulawula izindleko zezingane zabo noma ...
I-Iliad iyi-opharetha yekhadi lesi-French esikhokhelwa kuqala, isisebenzisi eminyakeni yamuva nje senze igebe elibalulekile phakathi kwabo bonke labo basebenzisi abangafuni noma abangakwazi ukukhokha imali yanyanga zonke futhi okuwukuphela kwenketho yabo yokuhlala uxhumene ngokusebenzisa ikhadi elikhokhelwa ngaphambili. Inani lezinketho ezitholakalayo zokushajwa kabusha...
Labo abanesevisi ekhokhelwa ngaphambili yezinga leselula iDeutsche Telekom AG, enye yezinkampani ezinkulu eYurophu mayelana nezokuxhumana, bangenza i-Telekom ekhokhelwa ngaphambili ishaje kalula ngokulandela izinyathelo ezikulesi sifundo. Ngaphezu kwalokho, uzokwazi futhi ukwazi eminye imininingwane yokusetshenziswa kwalolu hlobo lwamakhadi ...
I-SFR iwuhlobo lwe-SIM khadi ekhokhelwa ngaphambili yaseFrance. Uma usuka lapho noma uhlele ukuya lapho, ungajabulela ucingo lweselula ngaphandle kwezivumelwano futhi ukhokhele lokho okudlayo kuphela. Leli khadi le-Pass SFR La Carte lisebenza ngendlela elula kakhulu, kufanele nje uqashe okubhaliselwe, uthenge ...
Uma ungakabi nalo ikhadi le-Culture Nuri noma usunalo futhi ufuna ukwazi ukuthi ungaqhubeka kanjani nokushajwa kabusha ikhadi lakho le-Cultural Nuri, kulesi sifundo uzokwazi ukufunda konke odinga ukukwazi mayelana nale sevisi yaseNingizimu Korea. . Indlela yokujabulela inqwaba yezinkonzo zabo futhi uhambe ngokukhululeka. Ngalesi Siko…
I-CallYa iyisevisi ekhokhelwa ngaphambili ye-Vodafone eJalimane, futhi ikuvumela ukuthi ube nenani ledatha yokuphequlula kanye nezingcingo ngaphandle kokuboshwa kwinkontileka. Lolu hlobo lwesevisi ludume kakhulu kulabo abafuna ukukhokhela lokho abakudlayo kuphela, futhi balondoloze izingcingo futhi babe nokunye okwengeziwe ...